Collabora gosipụtara nkọwa ndị ọzọ gbasara Monado | Site na Linux
Isaac | | GNU / Linux, Egwuregwu, Noticias
Bewa nwere njikọ, ọkụ obodo na Anyanwụ.
Collabora, dịka ị nwere ike ịmaraworị, na-arụsi ọrụ ike iji weta ezigbo eziokwu na ahụmịhe eziokwu na nkwado na desktọọpụ Linux gị. N'ezie ị maraworị ọrụ Monado, mmejuputa oge nke oru Khronos nke OpenXR. Ọ bụrụ n'ịchọrọ, ị ga - ahụ ozi ndị ọzọ gbasara oghere ọrụ a na - emepe emepe gọọmentị webụsaịtị na ha kara aka maka ya.
Khronos ebipụtala nkọwapụta API na mkpuchi abstraction maka ngwaike eziokwu mepere emepe OpenXR 1.0. Site na ndozi ọ gụnyere, Collabora na-arụ ọrụ weta oge ojiri gaa Linux. You maraworị nkọwa zuru ezu banyere ọrụ Monado, mana ugbu a ọ bụ Collabora n'onwe ya ekwuola ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ amabeghị. Obi abụọ adịghị ya na ọ bụ ihe na-atọ ụtọ ijikọta teknụzụ ọhụrụ ndị a na desktọọpụ dabere na kernel anyị kachasị amasị.
Collabora na ndị Monado na-emepe emepe lekwasịrị anya na iweta oge ahụ zuru oke, mepere emepe OpenXR maka Linux. Ọ bụ akụkụ nke ngwanrọ ngwanrọ nke XR (eXtended Reality) nke na-agwakọta eziokwu dị adị na teknụzụ eziokwu na-abawanye. Nke a ga - akwado ngwaike iji ghọta etu esi ahazi usoro na - enweghị usoro sitere na ngwaọrụ HMD na ndị ọkwọ ụgbọ ala ma mara otu esi enye ngwaọrụ ndị ahụ, ọbụnakwa na - enye ọrụ site na ọkọlọtọ OpenXR API.
O yiri ka Mmelite kachasị ọhụrụ nke Monado adịbeghị nkwadobe, ebe ọ bụ na ọtụtụ iberibe na-efu efu. Mana ha kpọrọ onye ọ bụla ka ọ sonyere ma kọọ ma ọ bụ nye onyinye na ọrụ ahụ. N'agbanyeghị na emezughị, emeela nnukwu ndozi, dịka ndị ọkwọ ụgbọ ala ọhụrụ gụnyere gụnyere ịrụ ọrụ na PSVR na HMD, PS Move Controller, OSVR HDK, Razer Hydra, wdg. Mana ha ka ga-arụ ọrụ dị oke mkpa dịka ịmepụta koodu iji jikwaa njigide nke omume maka ngwaọrụ ngwaike dị iche iche.
Banyere ihe na-abịa, ha yiri ka ha na-akọ ọrụ ndị ọzọ maka usoro nyocha na ihe mmetụta na-elekọta ya. Ha na-ebu ụzọ elekwasị anya na sistemụ nyocha agba agba maka PSVR wee jiri ya nyere ndị nrụpụta ngwaọrụ ndị ọzọ na ndị na-agba ọsọ ...
Pathzọ zuru ezu na edemede: Site na Linux » GNU / Linux » Collabora gosipụtara nkọwa ndị ọzọ gbasara Monado